China Perkins Generator Series mpanamboatra sy mpamatsy | Xinneng
Nandritra ny 80 taona mahery, UK Perkins no mpamatsy lasantsy diesel sy lasantsy manerantany amin'ny tsena 4-2,000 kW (5-2,800 hp). Ny tanjaky ny Perkins dia ny fahaizany mampifanaraka tsara ny motera mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa, ka izay no mahatonga ny vahaolana amin'ny motera atokisan'ny mpanamboatra lehibe mihoatra ny 1.000 amin'ny tsenan'ny indostria, fananganana, fambolena, fikirakirana fitaovana ary famokarana herinaratra.
Ny fanampiana ny vokatra perkins manerantany dia omen'ny fizarana, faritra ary serivisy serivisy 4.000. Ny tambajotra mpaninjara Perkins dia manome fanampiana na aiza na aiza ilana azy manerana izao tontolo izao ary fenitra avo lenta no apetraka mba hanomezana antoka ny tambajotra mizara serivisy miavaka ho an'ny mpanjifa rehetra
Parameter teknika (50Hz)
Sina 0 # diesel maivana na ambony no tondroinaed ho an'ny sutech gensets miaraka amin'ny rano fisarahana solika mba hiantohana solika fahadiovana.
Parameter teknika (60Hz)
Ny maodely misy ny "E" dia herin'ny mailogensets;
Sina 0 # diesel maivana na avo kokoa dia rederaina noho ny getset sutech miaraka amin'ny rano fisarahana solika mba hiantohana solika madio.
Soso-kevitra ny handray API CF na ambony oil, maripana / viscosity an'ny 15W-40
Teo aloha: MTU Generator Series
Manaraka: SDEC Generator Series